प्रेम सप्ताह कुन दिन के ? - Rubas News
प्रेम सप्ताह कुन दिन के ?
प्रेम दिवस हरेक बर्षको फेब्रुअरी १४ मा विश्व भरीनै उत्साहका साथ मनाईन्छ । बिषेश गरी विश्वभरीकै युवायुवतीहरूले एउटा पर्वको रुपमा मनाउछन् प्रेम दिवस । फेब्रुअरी महिनालाई प्रेमको महिना पनि मानिन्छ । मौसम प्रेममय बनेको छ । हावामा माया नै बगेको छ । मायाको धुन हरेक शहर, गल्लि, लेक, बेशिमा तथा उपहार पसलहरूमा गुञ्जिन थालेको छ । विभिन्न पार्कहरु, रेस्टुरेन्ट, क्ल्बहरुमा मायालु जोडीहरुको भिड बढ्न थालेको छ । प्रेम दिवस आउनु भन्दा १ हप्ता अगाडी बाटनै प्रेम उत्सव सुरु हुन्छ । ७ फेब्रुअरि देखि १४ फेब्रेअरीसम्म सुरू हुन्छ प्रेम सप्ताह ,
७ फेब्रुअरि रोज डे
रोज डे (गुलाफ दिवस) ले पे्रम दिवस सुरुभएको संकेत गर्दछ । फुल सबै भन्दा प्रिय चिज मानिन्छ, त्यस मध्ये गुलाफको फुल प्रिय मानिन्छ । प्रेम सप्ताहको पहिलो दिन आफुले माया गरेको मान्छे लाई गुलाफ दिएर माया साटासाट गर्दछन् । शब्दमा गर्न नसकिएको प्रेम लाई गुलाफ दिएर पनी ब्यक्त गर्न सकिन्छ । बिशेष गरी रातो गुलाफ लाई प्रेमको प्रतिक मानिन्छ ।
८ फेब्रुअरी प्रपोज डे
प्रेम सप्ताहको दोश्रो दिन हो प्रपोज डे अथार्त प्रस्ताव दिवस । बर्षै देखि ब्यक्त गर्न बाँकी प्रेम प्रस्ताव तपाई प्रपोज डे को दिन राख्न सक्नुहुन्छ । आफुले मन पराएको मान्छेलाई गुलाफ दिँदै उ प्रतिको आफुनो भावना चाहाना मायाको महशुस ब्यक्त गर्न सकिन्छ ।
९ फेब्रुअरी चक्लेट डे
चक्लेट डे अथार्त चक्लेट दिवसको दिन आफ्ना नजिकका र प्रियजनहरुलाई चक्लेट दिएर खुशी बाढ्न सकिन्छ । प्रेम सप्ताहको तेश्रो दिन आफुले माया गरेको मान्छेलाई मुटु आकारको चक्लेट दिने चलन छ । चक्लेट जस्तै मिठो सम्बन्ध बनोस भनेर यो दिन चक्लेट सकटासाट गरेर मनाईन्छ ।
१० फेब्रुअरी टेड्डी डे
टेड्डीहरु प्रिय ब्यक्तिलाई दिने सबैभन्दा प्रिय उपहार मानिन्छ । मानिसहरु टेडे्डी सँगै आफ्नो विभिन्न आवेगहरु जस्तै रिस, खुसी, माया, सम्झना, पिर आदि टेडे्डी सँगै शेयर गर्ने गर्छन् । जस्तै खुशी हुदाँ टेडे्डी लाई किस गर्ने, कसैलाई सम्झिदा अगाँल्ने, रिस उठ्दा कुच्याउने आदि । प्रेम सप्ताहको चौथो दिन प्रेमीहरु आफ्ना प्रियजनहरुलाई टेड्डी उपहार दिन्छन् ।
११ फेब्रुअरी प्रोमिस डे
प्रोमिस(बाचा) दिवस गर्न सजिलो हुन्छ तर पुरागर्न भने निकै मेहेनत गर्नुपर्छ । प्रिय मान्छेसँग बाचा गर्नु भन्दा पनि आफ्नो माया र स्नेह उचित ढंगमा ब्यक्त गर्नु राम्रो मानिन्छ । जसले तयाइको सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।
१२ फेब्रुअरी हग डे
प्रेम सप्ताहको अर्को एक महत्वपुर्ण दिन हग डे (अंकमाल दिवस) हो । अंकमाल न्यानो र आकर्षक भावना हो, जसले एकअर्कालाई आनन्दित बनाउछ । एउटा प्यारो अंकमालले जो कसैको दिन उज्वल बनाउन सक्छ । अंकमाल प्रेम र स्नेह व्यक्त गर्ने एक महत्त्वपूर्ण महसुस हो ।
१३ फेब्रुअरी किस डे
किस(चुम्बन)प्रेम देखाउने सबै भन्दा मिठो रुप हो । तपाई फरक शैलीमा प्रेम अभिब्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ तर चुम्बन प्रेम अभिब्यक्त गर्ने उत्तम तरकिा हो । किस विभिन्न प्रकारका हुन्छन जस्तै फ्रेन्च किस,लिप टु लिप किस, फरहेड किस आदि । फरहेड किस लाई हेरचाह गर्ने चिन्हको रुपमा मानिन्छ भने फरहेड किस जिम्मेवार हुनसको चिन्ह पनि हो । किस डे प्रेम सप्ताहको छैठौँ दिनमा पर्छ ।
१४ फेब्रुअरी भ्यालेनटाइन डे
भ्यालेनटाइन डे अर्थात प्रेम दिवस, प्रेम गर्नेहरु जाेडिहरूकाे बिशेश दिन ,प्रेम गर्न कुनैको जरुरी हुदैन र प्रेम एक दिन मात्र हुदैन । तर सबै दिन खर्चेर यो एक दिनलाई महत्वपुर्ण र स्मरणिय बनाउन सकिन्छ । भ्यालेनटाइन डे मा प्रेमिहरु एक अर्कालाई खुशी बनाउन मनपर्ने गिफ्टहरु साट्ने, मनपर्ने ठाँउमा घुम्न जाने, सरप्राइज दिने गर्छन् । विश्वभर मनाइने दिवस हो भ्यालेनटाइन डे।
भनिन्छ प्रेम अनन्त हुन्छ अनि अदृश्य पनि,न त यस्को अन्त्य हुन्छ न त रुप नै हुन्छ । प्रेम एउटा महशुस हो, आभाष हो, चाहाना हो । प्रेममा हरेक दिन खास हुन्छ, त्यस्तै केहि खास सम्झना बनाउन, अनन्तमा स्मरण गराउन यो दिनलाई प्रेम दिवसको रुपमा मनाईन्छ ।माया गर्ने हरेक मनहरुलाई प्रेम दिवसको शुभकामना । यो प्रेमसप्ताहको हरेक दिन स्मरणिय बनोस । प्रेमिल महिना फेब्रुअरी मायाले भरियोस । तपाइको प्रेम अमर बनोस ।